Sida Loo Leeyahay Isbadalka Dijital ee Xiriirka Saameeyayaasha | Martech Zone
Sida Loo Leeyahay Isbadalka Dijital ee Xiriirka Saameeyayaasha
Khamiis, Janaayo 26, 2017 Isniin, Janaayo 18, 2021 Jordan Feise
Macaamiishaadu waxay noqonayaan kuwo xog ogaal ah, awood badan, dalbanaya, garasho leh, oo aan lagaran karin. Xeeladaha iyo jaangooyooyinkii hore maba la jaanqaadayaan sida dadku go'aan uga gaadhayaan maanta dhijitaalka iyo adduunyada ku xidhan.
Iyadoo la hirgelinayo suuqgeeyayaasha tikniyoolajiyadda waxay awood u leeyihiin inay aasaas ahaan saameyn ku yeeshaan sida noocyada ay u arkaan safarka macaamiisha. Dhab ahaan, 34% isbeddelka dhijitaalka ah waxaa hoggaamiya CMOs marka la barbar dhigo keliya 19% oo ay hormuud ka yihiin CTOs iyo CIOs.
Suuqgeyaasha, isbadalkani wuxuu u yimaadaa seef laba af leh. Adoo ka faa'iideysanaya isbeddelka dijitaalka ah, CMOs waxay saameyn ku yeelan karaan daqiiqad kasta oo yar oo ay la socdaan safarka macaamiisha. Dhinaca kale, oo leh 70% isku dayga isbedelka ururada kufashilmay, sidee ayuu isbedelka dhijitaalka ah ee ay hormoodka uga yihiin suuqleydu u arki karaa guul?
Soo bandhigida Saameynta 2.0: Mustaqbalka Suuqgeynta Saameynta
Si lagaaga caawiyo inaad jidkaaga u hesho qaabkan soo koraya, waxaan iskaashi la yeelanay Suuqa TopRank iyo Brian Solis, Falanqeeyaha Maamulaha, Altimeter Group, si ay u sahamiyaan suuq geeyayaasha fulinta shirkadaha waaweyn, oo ay ku jiraan American Express, 3M, Adobe, iyo Microsoft. Hadafkeena Si loo ogaado sida dhaqanka suuqgeynta saameyntu u kobcayo oo loo helo qaab isku xira dhibcaha u dhexeeya "suuqgeynta wax-ku-oolka" ee maanta iyo "xiriirka saameynta" ee berri.
Saameynta 2.0: Mustaqbalka Suuqgeynta Saameynta waxay ku saabsan tahay ogaanshaha adduunka xiriirka saameynta leh - anshax cusub oo ka gudbaya dhammaan suuq-geynta xiriirka, oo lagu dhisay aasaaska is-naxariisashada iyo macaamiisha. Daraasaddan cusub waxay iftiiminaysaa xeeladaha Saamaynta 2.0, kuwaas oo mideeya kooxo marba mid u kala sooca si ay saameyn ugu yeeshaan iibka, qanacsanaanta macaamiisha, iyo haynta.
Soo Degso Warbixinta oo Dhameystiran
Halka aan aad kuugu dhiirigalin lahaa kala soo bax warbixinta oo dhameystiran si aad u hesho cilmi baarista aad ugu baahan tahay inaad si kalsooni leh ugu dhex socotid dhulkan cusub, waxaan ku siin doonaa dhuumaaleysi sedex aragtiyood oo waaweyn oo ku saabsan warbixinta.
Milkiilayaasha Barnaamijka Saameeyayaasha iyo Hawl wadeenada waa ay ka go'een
Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee saameynaya mustaqbalka suuq geynta saamaynta waa in badanaa lakala qaybiyo. Tani waxay ka hortageysaa saameyn ku yeelashada feejignaanta fulinta iyo ka faa'iideysiga dadaallada isbeddelka ballaaran ee dijitaalka ah. Isla mar ahaantaana, waxaan baranay in isbeddelka dhijitaalka ah iyo xiriirka saameyntu ay si isku mid ah u saameeyaan dhinac kasta oo ganacsi.
Waxaan ogaanay taas 70% barnaamijyada saamaynta leh waxaa iska leh suuq geyn, laakiin shaqooyinka kale, oo ay ku jiraan gen dalabka, PR, wax soo saarka, iyo warbaahinta bulshada, waxay si firfircoon ula shaqeeyaan saamileyda sidoo kale. 80% dadka wax iibiya waxay dhahaan seddex ama kabadan waaxaha waxay lashaqeeyaan saamileyaal, taas oo macnaheedu yahay saamaynta waxay ubaahantahay in shaqooyin iskutallaab ah lawaangaliyo halkii milkiilaha kelida ah ee suuqgeynta. Saameyntu waxay u baahan tahay koox ka mid ah kooxda heysata shaqooyinkan kala duwan si ay u kasbato feejignaanta fulinta isla markaana ay saameyn ugu yeelato safarka macaamiisha goob kasta oo taabasho ah.
Xiriirka Saameynta Saameynta Masaafada Safarka Macaamiisha
Kaliya kalabar (54%) ee suuqleyda ayaa khariidadeeyay safarka macaamiisha sanadkii la soo dhaafay. Shirkadaha ugu tirada yar ee qorsheynaya safarka waxay helayaan istiraatiijiyad, aragtida macaamiisha oo saameyn weyn ku leh ka baxsan kooxda suuq geynta. Khariidaynta safarka ayaa lagama maarmaan u ah shirkadaha si ay u helaan aragtiyo iyo ugu dambeyntiina, faa'iido tartan ah.
Haddii aad ku dhammaystiri lahayd geeddi-socodka khariidaynta safarka macaamiisha madal Maaraynta Xiriirka Saamaynta (IRM), ma ogaanaysid oo keliya dhammaan saamileyaasha muhiimka ah ee ganacsigaaga, laakiin sidoo kale waxaad daaha ka qaadi doontaa sida mid kastaa u saameynayo safarka macaamiisha si gaar ah. Brian Solis, Falanqeeye Maamule, Kooxda Altimeter
Soo helitaanka cidda saamaynta ku leh macaamiishaada heer kasta oo safarka macaamiisha ah ayaa kaa caawin kara inaad si fiican u aqoonsatid kuwa wax ku oolka ah ee inta badan ku habboon astaantaada. Intaa waxaa sii dheer, habka khariidaynta macaamiisha ayaa si aan macquul ahayn u soo bandhigaysa saamileyaal cusub oo saameyn ku leh go'aamada heerarka muhiimka ah. Nidaamka khariidaynta macaamilku wuxuu si dabiici ah ugu riixi doonaa ganacsatada inay dib uga fikiraan dadaalka suuq geynta saamaynta.
Kordhinta Miisaaniyadaha Saameynayaashu Waxay Muujinayaan Kala-mudnaanta Istiraatiijiyadeed
Sii wadida inaad u dhawaato suuq geynta saamileyda sidii caadiga ahayd waxay kugu sababi doontaa inaad lumiso xakamaynta astaantaada iyo awoodda aad ugula tartami karto adduun ay macaamiisha gacanta ku hayaan. Waa waqtigii la kala hormarin lahaa xiriirka saamaynta leh. Hogaamiyeyaashu waa inay si xeeladeysan ula jaan qaadaan saamileyaasha barta macaamil kasta laakiin, waa inay sidoo kale maalgashadaan Maareynta Xiriirka Xiriirka madal si wax ku ool ah u socodsiisa uguna fiicnaato waxqabadyada muddada-dheer.
55% suuqleyda miisaaniyadaha saamaynta ayaa la filayaa inay fidaan. Waxaa ka mid ah miisaaniyadda loogu talagalay suuqleyda isticmaala tikniyoolajiyadda 77% waxay qorsheynayaan inay waxbadan qarash gareeyaan. Markaad eegto jaantusyada hoose, waxay si dhakhso leh u cadahay in aqlabiyada miisaaniyadaha suuq geynta saamaynta ay ballaadhin doonaan bilaha soo socda.
Haddii aad meherad tahay, waxaad ku jirtaa meheradda saamaynta. Isbeddelku had iyo jeer wuxuu ka bilaabmaa hal khad miisaaniyadeed markaa waxaad u baahan tahay xoogaa horyaal ah oo ka tirsan ururka si aad u tiraahdo waxaan isku dayeynaa tan oo aan aragnaa waxa dhacaya. Philip Sheldrake, Maareynta Maareeyaha, Wada-hawlgalayaasha Euler
Dejinta Aasaaska Saameynta 2.0
Waa markiina. Suuqge ahaan, sidee ayaad dhakhso ula socon doontaa isbeddelka dhijitaalka ah? Adoo baranaya wax badan oo ku saabsan sida macaamiisha ay u gaaraan go'aamada iyo waxa saameyn ku leh. Qaado aqoontaada Saamaynta 2.0 wixii ka baxsan seddexdan natiijo ee muhiimka ah. Si aad u hesho toban talaabo oo waxqabad leh oo aad ku bilowdo dejinta aasaaska Saamaynta 2.0, soo dejiso Saameynta 2.0: Mustaqbalka Suuqgeynta Saameynta. Waxbadan ka baro khariidaynta safarka, isbeddelka dhijitaalka, iyo saamaynta maanta.
Tags: kooxda mitirkabrian solisSafarka macaamiishaSaameynta 2Saameynta 2.0Saameynta 2.0: Mustaqbalka Suuqgeynta Saameyntasaameynsuuqgeynta suuqgeyntaMilkiilayaasha barnaamijka saamaynta lehMaareynta xiriirka saameyntaMRIPhilip Sheldraketracker
Jordan Feise waa Maamulaha Suuqgeynta Saameynta ee Traackr, maareynta maareynta saameynta. Jordan waxay jecel tahay inay xiriir la sameyso mufakiriin hal abuur leh iyo wakiillada isbeddelka ee suuqgeynta. Xor ayaad u tahay inaad tweet gareeyso @jifiseee dhammaan su'aalahaaga xiriirka waxyeelleeya ee gubanaya.
Maxaan dib ugu magacdarnay oo ugu badalnay Domainkeena Martech.zone